HOCD - အဖြေများကိုမရှာပါနှင့်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
Fapstronauts ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဒီစာဟာ HOCD ကိုဖြတ်သန်းနေသူတိုင်းအတွက်ပါ။ ငါလုပ်နိုင်လို့မင်းကိုနိုင်ကိုနိုင်နင်းငါသိစေချင်တယ်။ ငါဒီနေရာကိုတစ်နှစ်လောက်ရောက်နေပြီ၊ နောက်ဆုံးတော့ငါဒါကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။ ဤအရာသည်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအဖြေများကိုရှာဖွေနေသူမည်သူမဆိုဖတ်ရန်အချိန်ယူလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်သိပြီး၎င်းကိုလွှတ်လိုက်သည်။ ငါမကြာမီကြောင်းရလိမ့်မယ်
ပထမ ဦး စွာငါ့အပေါ်မှာအနည်းငယ်နောက်ခံ။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာအားစမ်းသပ်သည်၊ မလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄ နှစ်အရွယ်တွင်အခြားယောက်ျားလေး၏လိင်တံကိုခံတွင်း၌ရှိခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲထိုးထည့်လိုက်တာကတော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်လို့တွေးမိတာ။ ငါလိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းကိုအမြဲတမ်းရောက်နေတဲ့အထိငါအဲဒီအကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားမှာလိင်မှုကိစ္စပြုသူဖြစ်ပြီးလိင်တူမေထုန်အကြောင်းကိုသူမပြောခဲ့သည်။ သူမအစ်ကိုကသူ့ကိုယ်သူလိင်တူချစ်သူဖြစ်သည်။ ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတိုလေးကိုကျွန်တော်တွေးမိသောကြောင့်စိတ်ပျက်မိသည် -“ ကောင်းပြီ၊ အခုငါဒီရေရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရမယ်။ ” နောက်ဆုံးတော့သူမသည်အမျိုးသမီးများနှင့်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်မြက်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ “ ငါကလိင်တူမေထုန်ဆိုတာဘယ်တော့မှမသိဘူးဆိုရင်ကော။ ” ငါ HOCD နှင့်အတူသင်တို့အများစုရှိသည်သေချာပါတယ်သကဲ့သို့။ ငါတသက်လုံးလုံးအဆက်မပြတ်ရိုက်နေတုန်းအသက် ၁၂ နှစ်မှာ PMO ကိုစခဲ့တယ်။ ငါစာသားကို ၆ နာရီ + မတိုင်မီကအထိပင်စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်နေမိသည်။ ငါ့ကို“ ငါလိင်တူချစ်သူမဖြစ်နိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့အတွေးကနောက်ဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့ porn ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကြီးစိုးမှုဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ငါထင်ခဲ့တယ်၊ ငါသာလိင်တူချစ်သူဖြစ်ပါကလိင်တူချင်းချစ်တဲ့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကိုငါကြည့်ကောင်းမြင်လိမ့်မည်။ ထိုအခါငါထူးဆန်းစွာအလုံအလောက်ငါ့ကို cum လုပ်သော shemale porn သို့သွားကြ၏။ (ငါဤသွားရမယ့်) ငါထွက် freaked ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဖြောင့်ဖြောင့်သော fetish ဟုထင်ရသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ HOCD ကိုအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ငါ tbh ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။
ဒီအချိန်မှာငါတစ်ခုခုရှင်းပြဖို့လိုတယ်။ ငါဒီစွဲ, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်မှု, OCD နှင့်မကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုဖြတ်သန်းသွားခဲ့သည်။ ဒီအချိန်အတောအတွင်းငါလိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်း၏မှောင်မိုက်ဘက်ခံစားခဲ့ရမကြာခဏ။ ဤဘုတ်အဖွဲ့ကိုမည်သူကြည့်ရှုသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အသေးစိတ်မသွားပါ။ ဒါဆိုငါ့ကို homophobic ကို fuck ဆိုတဲ့အဖြစ်ကနေစတင်ခဲ့တာပါ၊ ကျွန်တော်ဟာလိင်တူဆက်ဆံတာကိုမခံချင်ခဲ့ဘူး၊ ငါတွေ့ကြုံခဲ့တာတွေကြောင့်အဲ့ဒီ့ဖြစ်လာတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်မအမျိုးသမီးစိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဆီသွားခဲ့တယ်။ သူမကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးသူမကကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ပုံမှန်အဖြေကတော့“ မင်းဟာမင်းရဲ့လိင်စိတ်ကိုမလုံခြုံဘူး” လို့ပြောခဲ့တယ်။ ငါပြောချင်တာကယောက်ျားတွေ၊ လိင်တူချင်းမတူသူတစ်ခုခုဟာသူတို့ရှေ့မှာရှေ့မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမြင်တွေ့ရပြီးလုံးဝအေးဆေးနေသင့်တယ်။ လူတချို့အတွက်တော့မအေးပါဘူး။ ကာလ။ ငါသူမကိုမတွေ့တော့ဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တွက်ကြည့်တော့မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ် ဒါကဒီနှစ်မတ်လပါ။
ငါအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျဖြစ်လာတယ်။ ငါမိန်းကလေးများအားလုံးဆွဲဆောင်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရ, ငါယောက်ျားပတ်ပတ်လည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရတယ်။ ငါယောက်ျားတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တစ်ခုခုမှားနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကလူတွေကြားမှာလိင်တူချစ်သူတွေအများကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုကျပန်းချပစ်လိုက်တယ် ဘယ်သူလဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူး၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာသက်တမ်းအရင့်ဆုံးသောလူမိုက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကအဲဒီလိုလုပ်လိမ့်မယ်။ ငါအမြဲတမ်းဒေါသထွက်နေတာကြောင့် (သို့) OCD မှလွဲ၍ ဘာမှမအာရုံစိုက်နိုင်ခဲ့လို့နောက်ဆုံးမှာငါနဲ့ပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့လှပသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးပျက်သွားခဲ့တယ်။ ငါမှာတခြား OCD အမျိုးအစားတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကအဆိုးဆုံးပဲ။
တစ်နေ့ကျတော့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါဆေးသောက်ဖို့လိုတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေနေတယ်၊ ​​ငါဘာမှစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး၊ ငါဟာထိန်းချုပ်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။ ဒါနဲ့ Celexa 20mg ကိုသောက်ခဲ့တယ် အစပိုင်းမှာတော့လုံးဝမကူညီဘူး။ တစ်နေ့ငါနိုးလာပြီးနောက်ဆုံးစဉ်းစားမိနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်မဟာဘယ်တော့မှယောက်ျားတွေကိုဘယ်တော့မှဆွဲဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်၊ ငယ်ငယ်ကတည်းကစိတ်ထိခိုက်စရာတခုခုကိုငါကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး၊ ကျွန်မဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာလူဆိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေအဖေကငါ့ကိုဆွဲဆောင်ဖို့သူငယ်ချင်းတွေအိမ်တွေမှာနေပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ကို fagot လို့ခေါ်တယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကကျွန်တော့်ကိုလိင်တူချစ်သူ၊ လိင်တူချစ်သူလို့ခေါ်တယ်၊ ဂျပိန်ဂျင်းဘောင်းဘီတွေကို ၀ တ်ပြီး Korn ကိုနားထောင်တာ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်။ ငါကြိုက်နှစ်သက်သည့်မိန်းကလေးအချို့ကကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သောဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်သူသည်လိင်တူချစ်သူဖြစ်ရမည်။ ဒါနဲ့ငါထွက် freaked ။ ဦး နှောက်သည်ငါနှင့်အတူအစဉ်မပြတ် fuck ဆိုတဲ့အခါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်မိတ်ဆုံမိပါက၊ “ အိုးဒီမှာယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကကြက်နို့စို့တာလား? ကောင်မလေးကအရမ်းပူနေတယ်” လို့ထင်လိမ့်မယ်။ ငါသိသမျှအရာအားလုံးသည်အတုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ဒါဟာရယ်စရာပါပဲ။
ဒါနဲ့ YBOP ကိုတွေ့ပြီးစိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ဖတ်ခဲ့တယ်။ Neurotic Planet ကိုတွေ့တယ်၊ ပြီးတော့ငါလိင်တူဆက်ဆံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုတိုင်းကိုဖတ်ပြီးမင်းကိုတစ်ခုခုပြောပြခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ အိုင်တီမကူညီပါဘူး။ ဟားဟား။ သင်သာထပ်မံသင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆက်လက်လမ်း။ စိုးရိမ်စိတ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုအကြားကြီးမားသောခြားနားချက်ရှိပါသည်။ ငါလစ်ဘရယ်မီဒီယာနဲ့ဝေးဝေးနေခဲ့တယ် (မင်းလိုချင်ရင်မင်းစိတ်ဆိုးနိုင်တယ်၊ နားထောင်ရုံပဲ) ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလိင်တူဆက်ဆံခြင်းစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်တဲ့အခါလူတိုင်းက“ လူကိုဂရုစိုက်တယ်၊ ဒါကိုကြိုးစားကြည့်ပြီးသင်ကြိုက်လားဆိုတာကြည့်ပါ။ လိင်တစ်ရောင်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ စသည်တို့ ငါမင်းကိုပြောခွင့်ပြုပါ၊ ရှင်းပြပါရစေ၊ လိင်တူချစ်သူယောက်ျားတိုင်းကိုမိန်းမတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ပြောပါ။ သူတို့အဖြေကဘာလဲ။ မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲ? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလူတွေကိုကြိုက်လို့ပဲ။ သွားပြီးယောက်ျားမှန်ကိုပြောပါ။ သူတို့ကအမျိုးသမီးတွေကိုကြိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဖြေမဟုတ်ဘူး။ အမျိုးသမီးများနှင့်အတူတူပါပဲ သို့သော် bi- လိင်ရှိပါတယ်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုကြသည်။ ဒါဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကဘယ်သူ့ကိုမှတစ်စုံတစ်ရာသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်အတင်းအကျပ်ပြုခိုင်းခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အကြှနျုပျ၏ကုထုံးသစ်ကဤသို့ပြောသည်။ မည်သူကမှသင့်အားဘာမှမယုံကြည်စေနိုင်ပါ။ ငါဘယ်လောက်အထိငါကြိုးစားနေတယ်၊ ​​ငါ့ကိုငြင်းပယ်နေတာလဲ၊ ငါငြင်းချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ငါဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးရှိခဲ့ရင်ငါဟာအမြဲတမ်းဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မှန်မှန်ပဲငါဂေးမဟုတ်ဘူး၊ ငါဂေးမဟုတ်ဘူး။ အမြဲတမ်းမိန်းမပုံစံကိုဆွဲဆောင်တယ်၊ ငါမိန်းမရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ကိုသဘောကျတယ်၊ လိင်တူချစ်သူသူတစ် ဦး အဘို့အတူညီ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငါ့အတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကမင်းလိုချင်တဲ့သူ၊ ကောင်လေးဒါမှမဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူတူသွားဖို့ပဲပြောပြော၊ ကျွန်တော်တစ်ခုခုပြောပြပါရစေ။ မလုပ်ပါနှင့်။ ငါအလွန်လစ်ဘရယ်ပြည်နယ်တှငျနထေိုငျနှင့်တော်တော်များများရုံသင်လိုချင်သော fuck ဆိုတဲ့သမျှဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့် HOCD နှင့်အတူသွားနှင့် dudes နှင့်အတူဖြစ်ရန်သူတစ် ဦး အဘို့အကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သင်ကနှစ်သက်လိမ့်မည်ဖြစ်လိမ့်မယ်သင်တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ဝိသေသလက္ခဏာအကျပ်အတည်း။ ငါလိမ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကအဲဒီမှာသွားနေတယ်။ OCD သည်စိတ်၏နတ်ဆိုးဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအောင်မြင်နိုင်သည်။ ငါဒီအားဖြင့်ထိခိုက်နေသောသင်တို့ကိုကူညီပေးရန်နည်းလမ်းများစာရင်းပြုစုခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်။
မည်သူမျှမဟုတ်ဘဲစိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲမိတ်ဆွေတစ်ဦးမဟုတ်တစ်ဦးက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသင်နေသောသင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင့်ဦးနှောက်ကသင်၏အသက်တာ၌ဘာမှလုပ်နေတာကနေသင်တို့ကိုကြိုးစားစောင့်ရှောက်ဖို့, သငျသညျတွှေအရာတက်စေမည်။ ဒီစိုးရိမ်ပူပန်လျက်နှင့်မစစ်မှန်တဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖြစ်ပါသည်နားလည်သဘောပေါက်
သင်လိင်တူချစ်သူတွေကိုစမ်းကြည့်သင့်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုနားမထောင်ပါနဲ့။ ဒီဟာကအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပေမယ့်ဂရုမစိုက်ပါဘူး အကယ်၍ မင်းဘဝတစ်ခုလုံးကိုတည့်မတ်မှန်ကန်စွာတည်ဆောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းဟာအမြဲတမ်းဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်မတ်နေထိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေ၊ ကြိုးစားပြီးဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူပါပဲ။ သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုမုန်းတီးသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန်လိင်တူချစ်သူတစ် ဦး အတွက်မဟုတ်ပါ။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုကတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသို့သော်ယဉ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သင့်အားမမှန်မကန်သောအရာများကိုယုံကြည်စေပါလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်က၎င်းအားအရှိန်မြှင့်ပေးသည်ကိုသင်သတိပြုရပါမည်။ သငျသညျကဖြစ်ပေါ်စေသောတ ဦး တည်းဖြစ်ကြသည်။ အခြေအနေများကပိုပြီးထွက်လာစေခြင်းငှါသင်တို့မူကားသင်ထိန်းချုပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကိုခင်ဗျားကိုဒီလိုပဲပြောပါရစေ။ ကျွန်မရဲ့လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုမုန်းတီးခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းပဲ။ လူအမျိုးမျိုးမှာကောက်ချက်ချမှုတွေရှိတယ်၊ လူတိုင်းကမတရားဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ ငါလှသောအမျိုးသမီးများနှင့်အမြဲစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းခဲ့သည်။ အခုဘာကျန်သေးတာလဲ ငါ့အညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစွဲ အဲဒါနောက်ဆုံးကျန်နေတာပဲ ဒီမှတဆင့်သွားသူမည်သူမဆိုငါ့အကြံပေးချက်, porn ကိုရပ်တန့်။ လိင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအချို့၏ပြောဆိုချက်ကိုမယုံပါနှင့်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပါ။ ၎င်းသည် Reddit တွင် WAY မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသောမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအခွင့်အာဏာကိုနှစ်သက်စေသည်။ ဝေးလည်း reddit ထံမှနေပါ။ သင့်ကိုယ်သင်စဉ်းစားရန်နှင့်ကုသရန်အခွင့်အလမ်းပေးပါ။ ယောက်ျားတွေဖြစ်နိုင်တယ် ငါသည်ငါ့မြည်းကိုပယ်ရယ်မောဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဒီအချိန်မှာလိင်တူချစ်သူဖြစ်ခဲ့သည်ငါ့ကိုပြောပြနိုင်ဘူး။ ဘာမှမဖြစ်လျှင်, ဒီငါ့ကိုအရင်ကထက်အများကြီးပိုမိုအားကောင်းစေ၏။ OCD နှင့်အခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများသည်အခြားအရာများထက်အမှန်တကယ် ပို၍ အထောက်အကူပြုကြောင်းသတိပြုပါ။
TL: DR - ငါ HOCD ကိုကျော်နိုင်ပြီ၊ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေအကြောင်းအများကြီးနားလည်တယ်။ ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်သူလဲဆိုတာဘယ်သူ့ကိုမှမပြောနိုင်ဘူး။ စိုးရိမ်စိတ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုအကြားကြီးမားသောခြားနားချက်ရှိပါသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားလျှင်ပင်သင်နှင့်မတူကွဲပြားသောအရာများကိုပြောင်းလဲရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုမိပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်၊ သင်ကလိင်တူချစ်သူဆိုရင်၊ သင်ကလိင်တူချစ်သူ၊ နောက်ဆုံးမှာဒီအကောင့်ကိုငါဖျက်ပစ်တော့မယ်။ ဒါပေမဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမေးစရာမေးခွန်းတွေကိုငါဖြေဖို့ရက်အနည်းငယ်လောက်မှာရှိလိမ့်မယ်။ ငါကတခြားသူတွေကိုကူညီချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတာငါသိတယ်။ သူတို့မှာပြhaveနာတစ်ခုရှိရင်လူတိုင်းကအကူအညီယူဖို့လိုတယ်။
LINK - HOCD, သင်တို့ကိုငါချိပါပြီ။ ဤသည်အကူအညီရှာသောသူမည်သူမဆိုအဘို့ဖြစ်၏။ အကူအညီတောင်းအောက်ခြေမှာစာရင်း။
ORIGINAL ပိုစတာ BY comments:
ငါနေ့တိုင်း Google HOCD ကိုသုံးခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းစိတ်ရှုပ်ထွေးခဲ့ရတယ်။ လိင်တူမေထုန်၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုမကြည့်ပါနှင့်သို့မဟုတ်သင်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဖတ်ရှုရာကိုမယုံပါနှင့်။ မင်းမလုပ်သင့်တာမှန်သမျှကိုငါစာသားအတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ် အချိန်တန်သော်သင်ထွက်လာသည့်ပုံပြင်များကိုဖတ်နိုင်ပြီးသင်ဘယ်တော့မျှထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနားလည်လာလိမ့်မည်။ သင်သော်လည်းမရှိသေးပါ။ ငါရောက်နေတာ ၆ လရှိပြီ။ ဟုတ်တယ်၊ ကျော်ဖို့အတွက်တကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့အချိန်လိုတယ်၊ မင်းကိုငါလိမ်မှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခုသတိရပါ၊ ငြင်းပယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါ့ကိုနားလည်ဖို့အခက်ခဲဆုံးပဲ။ မင်းကမိန်းကလေးတွေကိုကြိုက်တယ်၊ မိန်းကလေးတွေနဲ့အတူရှိနေတယ်၊ အမြဲတမ်းအဲဒီလိုဖြစ်မှာပါ။ OCD သည်လှည့်စားရသောကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယခုဤတွင်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ဟာထူးဆန်းတဲ့နေရာမှာရှိနေပြီးသင့်ရဲ့အချက်ပြမှုတွေကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်မဖြုတ်ပစ်ဘူး။ သင်လိင်တူချစ်သူဖြစ်အံ့သောငှါလက်ခံရန်ရှိသည်။ ဒါကမိုက်မဲလို့ထင်နေပေမယ့်မဟုတ်ဘူး။ ပိုကြာလေလေအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့သင်စောင့်ဆိုင်းလေကြာလေလေ၊ ငါ့ကိုယုံ။ ထိုစာအုပ်ကိုကောက် ယူ၍ သင်၏ကုထုံးအားဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကိုရှင်းပြပါ။ သူတို့ကမင်းတို့လိင်တူချစ်သူဖြစ်မယ်လို့မင်းကိုပြောရင်မင်းကမင်းလိုချင်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။ မရရှိပါက OCD အကြောင်းကိုသိသောကုထုံးကိုရှာပါ။ သင့်ကိုအမြဲစိတ်ချစေတဲ့ကုထုံးဆရာလည်းမလုပ်ပါနဲ့။ ဒါကလည်းအသုံးမဝင်ပါဘူး။ ငါအခုရောက်နေပြီဆိုတော့ ၁၀၀% မသွားဘူး။ ဒါပေမယ့်သူကပြောတယ်။ ငါတကယ်ဘဝအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကောင်းမွန်စွာရေးထားသည် - ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည် (၈၀/၂၀ လိင်တူချစ်သူ / bi)၊ မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်တွေနဲ့မင်းရေးတဲ့အမှန်တရားကိုငါတန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်။ အခြားသူကသင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသင့်ကိုမယုံပါနှင့်။ သူတစ်ပါး၏ထင်မြင်ချက်ကိုမယူမှတ်ပါနှင့်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူသား၊ တကယ်တော့ခင်ဗျားနားလည်တာကိုဆိုလိုတာ။ ဒီကိစ္စမှာဒီလိုပြသနာမျိုးမရှိတဲ့လူတွေကအဲဒါကိုမရကြဘူး။ ငါထင်သလိုသဘောမျိုးဖြင့်အခြားသူများကိုထပ်တူအခြေအနေမျိုးတွင်ကူညီပေးလိုသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသားအရေတွင်သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်းသည်ကောင်းမွန်ပြီးနောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းထပ်မံခံစားရပြန်သည်။ တစ်နေ့မှာလူ့အဖွဲ့အစည်းဟာလိင်မှုကိစ္စကိုဂရုမစိုက်တော့ဘဲရပ်တန့်သွားတဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့ကအရေးအကြီးဆုံးအရာတွေကိုအာရုံစိုက်နိုင်တယ်။ ငါကဤအရာကိုအလွန်အကျွံစွဲလန်းနေသောကြောင့်မိုက်မဲသည်ဟုခံစားရသော်လည်းသားရဲ၏သဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ OCD စာသားမိုက်မဲသည်။